China automobile crystal yangaphakathi multimedia yolawulo lweqhina uyilo mininzi iqhosha 5 series 7 series X1 X3 X5 rotary Tshintsha mveliso bmw kunye nabenzi | MaiKaiLa
ICrystal start / stop iqhosha
Isibambo sokutshintsha kwezinto
Isibambo sokutshintsha izixhobo seCrystal
I-LED yokutshintsha izixhobo
IDrive crystal multimedia yokulawula iqhosha
Iqhosha le-BMW Crystal Start
Isibambo se-elektroniki se-LED
Isiphatho seCrystal Automotive Shift
I-Auto Crystal Series Idriver yemultimedia yokujikeleza kweqhosha
I-automobile crystal yangaphakathi yemultimedia yokulawulwa kweqhina lokuyila iqhosha le-multifunction button 5 series 7 series X1 X3 X5 Rotary switch for bmw
Iqhosha Crystal. Kulula ukuyifaka kwaye umbandela uyakrwela kwaye unganyangeki. Izinto ezingenisiweyo, inkqubo yokwahlulahlula Umbala wesingxobo usondele kwimoto yoqobo. Iziphumo ezigqwesileyo emva kokukhanyisa ebusuku. Amaqhosha abonakala ngokucacileyo ebusuku, ekonyusa umbono wokubamba. Iphuhlisiwe ngokusekwe kwidatha yoqobo yenqwelo. Ukuziqhelanisa okuphezulu. Ayichaphazeli uvakalelo emva kofakelo.
Iqhosha Crystal. Kulula ukuyifaka kwaye umbandela uyakrwela kwaye unganyangeki. Izinto ezingenisiweyo, inkqubo yokwahlulahlula Umbala wesingxobo usondele kwimoto yoqobo. Iziphumo ezigqwesileyo emva kokukhanyisa ebusuku. Amaqhosha abonakala ngokucacileyo ebusuku, ekonyusa umbono wokubamba. Iphuhlisiwe ngokusekwe kwidatha yoqobo yenqwelo. Ukuziqhelanisa okuphezulu. Ayichaphazeli uvakalelo emva kofakelo. It
iphumelele ukunconywa ngabathengi abaninzi. Ukumodareyitha kwedatha yoqobo, eyenzelwe ngokukodwa imoto yakho. Utshintsho lulula njengolo. Yenza ubunewunewu bufikeleleke. Ukuphucula amava e-visul kwaye ukhethe izinto ezingaphaya kwengqondo yakho. Imoto yakho ayisayi kuphinda ikhathazwe zezi ngxaki njengokukhuhla, ukupeyinta ukupeyinta okanye ukuguga. Inzondelelo engapheliyo, ubusuku obumnandi. Umgangatho we-ABS. Ukuthungwa kweCrystal. Imoto ekhethekileyo. Ukuqhutywa ngokukhululekileyo. Yenziwe kakuhle. Kuluhlu olufanayo lwekristale ye-BMW, ​​ukuphucula imoto yakho ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ngaba usenexhala malunga nemoto engaphiliyo yangaphakathi? Iimveliso zethu ziya kuzisa umtsalane ongenamda kwimoto yakho. Masithandane nemvakalelo yokuhlala emotweni. Yongeza ulonwabo olukhulu kuhambo oludinisayo lokuqhuba. Unikezelo lofakelo lweemodeli ezininzi luyahlaziywa.
I-mankaleilab idrive crystal multimedia knob yicebo le-crystal eliqaqambileyo. Ihlaziyekile yaba liqhina elikhulu ukusuka kwiqhina elincinci. Inenkangeleko ekhazimlayo yekristale kwaye ilungiselelwe ngokukodwa iBMW. Ukongeza, kulula ukuyifaka. Inkqubo yayo ephezulu yokufaka umbala ekubuyiseleni ukufakwa kombala wokuqala akuchaphazeli ukujikeleza kunye nokusetyenziswa okubalulekileyo. Ukumelana ne-Scaratch kunye nokunxiba unyango lokumelana nesipili. Itekhnoloji ekhethekileyo yokutshiza igcina umsebenzi wokuqala wokubhala ngesandla. Isiciko seqokobhe leCrystal multimedia, likhanya kwikona nganye.
Ukulingana Kwemoto: i-BMW
Umzekelo: 3 Series, 5 Series, 4 uthotho, 1 Series, 6 Series, X3, X6, X5
Unyaka: 2016-2016, 2014-2016, 2016-2016, 2015-2016, 2015-2016, 2017-2019, 2015-2016, 2016-2017
Igama lebrand: ILebhu yeMankalei
Inombolo yomzekelo: IMKL068
Igama lemveliso: yikristale multimedia yokulawula iqhosha
Izinto:ABS, Electroplate, Ukulinganisa Crystal
Umbala: I-crystal / Silvir engabonakaliyo
Ubukhulu: Ubungakanani obuqhelekileyo
Inqaku lamagama: Gear Shif liqhina
Isicelo: Icandelo lezeMoto
Igama lemveliso Iqhina lolawulo lwe-Crystal multimedia
Chwetheza Izixhobo zangaphakathi zeMoto
Izinto eziphathekayo ABS, Electroplate, Ukulinganisa Crystal
Iimodeli eziguqukayo Kuzo zonke i-BMW NBT EVO MGU
Imvelaphi Guangzhou, China
Ukusetyenziswa gabalala Ulawulo lwe-iDrive multimedia
Umbala I-crystal / Silvir engabonakaliyo
Iphakheji 20cm * 10cm * 4cm
Egqithileyo Ukuphindaphinda okuninzi kweemoto, kusebenza kwi-BMW 118 116 ene-1.5T 1.6T kunye nezinye iimodeli zango-2012-2017
Okulandelayo: I-automobile crystal yangaphakathi yemultimedia yokulawulwa kweqhina lokuyila iqhosha le-multifunction button 5 series 7 serie X3 X5 Rotary switch
Crystal izixhobo iswitshi liqhina isiphatho imoto acceso ...
Esebenzayo imoto entsha 3 series F10 G20 G38 entsha ...
Esebenzayo Imoto entsha bmw X3, bmw f30 uyilo olutsha ...
Esebenzayo imoto entsha 2013-2020 ekhala uyilo ...
Automobile switsha Keyless ucinezelo eyongezwayo En ...
Ukuhanjiswa kweemoto kweJaguar XF kulungiswe i-R -...
Idilesi: 395 Tongyun Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang kwiPhondo, China
I-BMW icwangcisa isaqhwithi ngohlobo olunomda ...
I-F15 X5 ithathe indawo yeliyristal yegiya efanayo ...
I-BMW 3 Series yecrystal crystal yomzimba omtsha ...
Xa ujongene nokutshintsha kwemakethi ...
Iwebhusayithi yeMankalei Brand New
I-logo yeFord kunye negama likaBronco yipropathi yeNkampani yeeMoto iFord. I-Classic Ford Broncos ayinxulunyaniswa neNkampani yeFord Motor.